बालबालिकामा हुने ब्रेन क्यान्सर के हो ? लक्षण के के हुन् ?
भदौ २२, २०७४ बिहिवार ११:५४:०० प्रकाशित
ब्रेन क्यान्सर बालबालिकामा हुने क्यान्सरहरुमध्ये दोस्रो मुख्य क्यान्सर भएको संसारभरिको तथ्यांकले बताउँछ। मस्तिष्कको क्यान्सरमा टाउको दुख्ने, वाकवाकी, वान्ता, दृष्टि कमजोर, चक्कर लाग्ने, हातखुट्टामा कमजोरी र छारे रोगजस्ता लक्षण देखिन्छ। मस्तिष्कमा धेरै प्रकारका स्नायु कोषहरु हुनाले मस्तिष्कको क्यान्सर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। प्रत्येक प्रकारका क्यान्सरको आ–आफ्नै उपचार पद्दति र सफलताहरु छन्।
लक्षणका आधारमा टाउकोको सिटी स्क्यान वा एमआरआई जस्ता जाँचपछि यो रोगको निदान हुन्छ। यो रोगको मुख्य उपचार शल्यक्रिया नै हो। रेडियोथेरापी र केमोथेरापीबाट पनि यसको उपचारमा सफलता मिलेको छ। तीन वर्षमुनिका नानीहरुलाई भने रेडियोथेरापीले मस्तिष्कमा गम्भीर असर हुने हुनाले यो गरिँदैन। स्नायुकोषका सुरुवाती अपरिपक्व कोषहरु जुन गर्भको भ्रुणमा विकसित हुन्छ, यसबाट उत्पन्न क्यान्सरलाई Neuoblastoma भनिन्छ। यो क्यान्सर प्रायः एक वर्षको हाराहरीका बच्चाहरुमा हुने गर्छ। बच्चा पाँच वर्ष हुनुअगावै यस रोगको पहिचान भइसकेको हुन्छ।
यो रोगमा सबैभन्दा बढी देखिने लक्षण पेटमा छाम्दा भेटिने ट्युमर, पेटको दुखाइ र खुट्टाहरु सुन्निनु हो। पेट, छाती र घाँटीमा पलाउने Neuoblastoma ले नजिकको नशाहरुलाई थिची अन्य लक्षणहरु देखापर्न सक्छ। क्यान्सर सबैभन्दा बढी हाडमा फैलिने हुनाले हड्डीमा दुखाइ तथा भाँचिने हुन सक्छ। युएसजी गरेर शरीरका विभिन्न भागमा Neuoblastoma को पहिचान गर्न सकिन्छ भने एक्स रे गरेर हड्डीमा भएको फैलावट थाहा पाउन सकिन्छ। पिसाव र रगतमा यस ट्युमरले निकाल्ने केही पदार्थको जाँचबाट पनि यो क्यान्सरको निदान हुन्छ। ट्युमरको बायस्पीबाट यो रोगको थप पहिचान हुन सक्छ। Neuoblastoma को उपचारका लागि शल्यक्रियाका साथै केमोथेरापी र रेडियोथेरापी पनि गरिन्छ।
- डा. गणेन्द्रभक्त राय